Alunikwe indawo emqoka ulimizimpawu – Msunduzi News
UMphathiswa Wezenhlakahle Nokuthuthukiswa Komphakathi uNonhlanhla Khoza usecele umphakathi ukuba uthathe ulimizimpawu njengengxenye esemqoka ekuxhumaneni ukuze nalabo abangezwa nabangakhulumi bazizwe bekhululekile.
Ukunxusa kukaKhoza kulandela ukuhambela wakhe imijondolo yaseJika Joe eneMeya yomsunduzi uThemba Njilo. Bahambele kule ndawo emva kokufa kukaSinethemba Dlamini, okuyintombazane eneminyaka engama-13 ebiyisithulu etholakale idindilizile osebeni lomfula iDorpsruit ekwethwaseni kwale nyanga. Inhloso yokuhambela le ndawo bekuwukweluleka umphakathi ngokwengqondo emveni kokuthuka kwabaningi ngenxa yesehlakalo esishaqisayo kanye nokuthola izinselelo ezibhekene nomphakthi wakule ndawo. Kusolakala ukuthi le ntombazane ebifunda e-Open Gate School yaqala yadlwengulwa, yabulawa yashiywa kanjalo inqunu ngasemfuleni iDorpspruit. Sekuboshwe abesilisa ababili mayelana nalesi sigameko sokubulala.
Ngaphandle kwalesi sigameko, ngokwezibalo zikaMasipala uMsunduzi le ndawo enemizi engaphezu kwama-400 ihaqwe yizinkinga zenhlalo okubalwa izinga eliphezulu lokukhulelwa kwentsha, elophuzo oludakayo nokusebenzisa izidakamizwa, elobugebengu nokwebiwa kukagesi.
Ekhuluma nomphakathi emhlanganweni obubanjelwe esontweni lamaRoma iSt John of Ark, uKhoza uthe, “NjengoMnyango sishaqekile ngokudlula emhlabeni komuntu osemncane kangaka ngendlela enesihluku. Ngakho-ke sifuna ukuba luqondwe ulimizimpawu njengolimi olusemqoka kuzo zonke izingxenye zokuphila. Kungenzeka ukuthi le ngane ihlukunyezwe kuphindelelwa kodwa ingakwazi ukudlulisa ukukhala kwayo ngoba ingakwazi ukukhuluma. Ukube yona ibilwazi ulimizimpawu nalabo abaseduze kwayo ngabe ikwazile ukubika udaba lwayo kusenesikhathi.”
UKhoza uqhube wathi. “Asizile lapha ukuletha ukwelulekwa ngokwengqondo kuphela emphakathini kodwa futhi sinxusa umphakathi ukuba usondele sibambisane neminyango ukuze sinqande lolu khondolo lobugebengu. Ukulwa nobugebengu kusemahlombe ethu sonke, akusikho okomuntu oyedwa. Ngiyajabula ukuthi iMeya nayo ikhona lapha njengoba sizocela ukuba kufakwe ogesi abade basemgwaqweni kule ndawo.” UKhoza ubuye wagqugquzela umphakathi ukuba usebenzise izizinda zokubonisana ukuze kuxoxwe ngezindaba eziwuthintayo (umphakathi).
Ngesikhathi ubugebengu bubhebhetheka emphakathini, ilungu lawo uVuyiswa Mlozama uveze ukukhathazeka ngokuthi isikhathi esiningi amacala obugebengu awathathelwa phezulu ngamaphoyisa asepholisteshi ekuLoop Street. “Asazi ukuthi inkinga ikuphi , kodwa uma sike sathi siqhamuka eJika Joe udaba luvelwe luchithwe. Asazi ukuthi kufanele sethembe bani uma abantu okufanele ngabe bayasivikela kuyibona kuqala abasichithayo,” kuphetha uMlozama.
IMeya uThemba Njilo ithe emveni kwalesi sigameko bekufanele ukuthi uMasipala ahambele izakhamuzi ukuzozeseka. Uthe, “Sidabuke kakhulu ngokulahlekelwa yingane. Sinxusa ukubikwa walezigameko kusenesikhathi. Asisebenzisane ukuze silwe nobugebengu. Ukulahleka kwempilo yoyedwa kuwulahleka kweyabaningi.” UNjilo ubuye wexwayisa kakhulu ngokwebiwa kukagesi okudlangile endaweni.
IMeya iyaqhubeka isiza abanganemakhaya
Previous post: Kuhlomule nezingane ngolukaMandela
Next post: Abazali mabazibhalisele izitifiketi